MediaLight Mk2 24 Volt 5 sy 10 Meter (Tsy mifanaraka amin'ny USB) - Jiro MediaLight Bias
Home MediaLight Mk2 24 Volt 5 sy 10 Meter (Tsy mifanaraka amin'ny USB)
MediaLight Mk2 24 Volt 5 sy 10 Meter (Tsy mifanaraka amin'ny USB)
Vidiny tany am-boalohany $109.95
Vidiny tany am-boalohany $109.95 - Vidiny tany am-boalohany $179.95
Vidiny ankehitriny $99.95
product.variants.choose_variant 5 Meter - $ 99.95 10 Meter - $ 169.95
5 metatra 10 metatra Length
MediaLight Mk2 24 Volt dia misy:
Tabilao MediaLight Mk2 24 Volt
24v manjavozavo sy lavitra
24v famatsiana herinaratra
Warranty 3 taona (fohy kokoa ny fe-potoana fiantohana ataontsika amin'ny herinaratra mahery)
Ity vokatra ity dia mitaky herin'ny AC 110v na 220v. Tsy natao hampiasaina amin'ny alàlan'ny USB izy io.
Ny ankamaroan'ny vokatra MediaLight dia natsangana hihazakazaka amin'ny USB 2.0 (hatramin'ny 4 metatra) sy ny herin'ny 3.0 (ambonin'ny 4 metatra). Io dia mametra ny famirapiratana fatratra hatramin'ny 300 lm amin'ny halavan'ny tsipika. Fepetra iray hafa an'ny 5v dia ny halavany. Ny MediaLight Mk2 Flex 6m no hazavana tokana lava indrindra misy alàlan'ny USB misy.
Izany dia mihoatra ny ampy amin'ny jiro fitongilanana ho an'ny rehetra, fa ny toe-javatra faran'izay mafy indrindra (fisehoana goavambe, rindrina maizina).
Na eo aza izany, indraindray ianao mila jiro LED mamiratra kokoa amin'ny halavany lava noho ny antony maro samihafa (fametrahana aritrano, tetikasa DIY, jiro lantom-peony, sns.)
Ho an'ny jiro mitongilana, saika tsara kokoa noho ianao ny mividy iray amin'ireo singa 5v ananantsika noho ity singa ity. Na izany aza, ny 24v dia azo alaina amin'ny toe-javatra ilana herinaratra bebe kokoa.
Ny MediaLight Mk2 24 Volt dia manome lumens 600 eo ho eo isaky ny metatra.